क्रान्तिमा जान रोक्ने पुष्पलाल ! ⋆ JINDAGANI.COM
Home » क्रान्तिमा जान रोक्ने पुष्पलाल !
क्रान्तिमा जान रोक्ने पुष्पलाल !
असार १५, २०७८	0	By कला अनुरागी
आज पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मदिवस l अध्ययनको सिलसिलामा ०२१ सालमा भारतको काशी पुगेका जगन्नाथ आचार्यले ०२७ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठलाई भेटे । उनी पुष्पलालको प्रशिक्षणबाटै कम्युनिस्ट पनि बने । ०२८ देखि २०३४ सालसम्म काशीमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय रेखदेखमा संलग्न भएर उनले पुष्पलालको सान्निध्यमा रहने अवसर पाए । पुष्पलालको विचार र व्यवहारलाई नजिकबाट नियाल्न पाए । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राजनीति र साहित्यमा सक्रिय आचार्यले पुष्पलालको विचार र व्यवहारबारे गरेको सम्झना आज पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मदिवसको सन्दर्भमा प्रस्तुत छ:
उहाँको मान्यता थियो– दैनिक ४ देखि ६ घण्टा अनिवार्य शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । व्यायाम वा लुगा धुने, भाँडा माझ्ने काम नै किन नहोस् । भन्नुहुन्थ्यो, ‘अनि पो तपाईं श्रमजीवीको सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ ।’
अधिकांश समय अध्ययनमा बिताउनुहुन्थ्यो । उहाँको अध्ययन गर्ने आफ्नै तरिका थियो । किताबमा ‘अन्डरलाइन’ गर्नुहुन्थ्यो र डायरीमा टिपोट गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ स्वाध्ययनमा निकै जोड दिनुहुन्थ्यो । त्यस क्रममा ‘एकपाखे’ अध्ययनबाट बच्न हामीलाई भनिरहनुहुन्थ्यो । उहाँको भनाइ हुन्थ्यो, ‘हामी एउटा वैचारिक धारामा हिँडे पनि सबैको विचार अध्ययन गर्नुपर्छ । चौतर्फी अध्ययनले मात्रै हामीलाई पोख्त
उहाँको औपचारिक अध्ययन एसएलसीसरह मात्रै हो । तर, उहाँ औपचारिक अध्ययनलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुहुन्थ्यो । ०२८ सालकै कुरा हो । हामी केही साथीहरू बुर्जुवा डिग्री बहिष्कार गरी नेपालमा क्रान्ति गर्ने भनेर काशीबाट हिँड्न तयार भएका थियौं । त्यो कुरा उहाँले थाहा पाउनुभएछ । म झोला ठिक पारेर बाटोका लागि खाजा बनाउँदै थिएँ । त्यसै बेला साथी गोविन्द ज्ञवाली कोठामा आइपुग्नुभयो । उहाँले मेरो झोला समातेर सोध्नुभयो, ‘कहाँ जाने तयारी हो ?’ मैले उहाँलाई ढाँटें । तर, उहाँले ‘तपाईंहरू कता जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाइसकेका छौं त्यसैले पार्टी कार्यालय जाऔं’ भनेर कार्यालय लिएर जानुभयो ।
डिग्री लिएर गुलामचाहिँ बन्नुहुन्न । कतिपय डिग्री लिनुअघि क्रान्तिकारी हुन्छन्, लिएपछि गुलाम बन्छन् । त्यस्तो नहुनका लागि स्वाध्ययन पनि गर्नुहोस् ।
उहाँ सामाजिक आन्दोलनमा जोड दिनुहुन्थ्यो । बिदामा गाउँ आउँदा ‘केही न केही सामाजिक आन्दोलनको सुरुवात गरेर आऊ’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यस्तै गाउँबाट फर्कंदा ‘एक्लै नआऊ, साथीलाई पनि लिएर आऊ’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले मैले पनि केही साथीलाई काशी लिएर गएँ ।
(कला अनुरागीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
जातीय विभेदको जरा